အမေရိကန်လေတပ်သည်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Linux ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် Linux မှ
အမေရိကန်လေတပ်သည်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Linux ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်
<° Linux အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များမှဆောင်းပါးများအပြည့်အစုံကိုကူးယူရန်အသုံးပြုသည်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖြစ်သောပိုမိုထိရောက်သောသတင်းများ၊ ဆောင်းပါးများကိုယူဆောင်လာရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားသည်။
သို့သော်ကတည်းက LinuxZone.es ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်အရမ်းကိုကောင်းကောင်းရေးထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တယ်။ ij လိယ Hidalgo ဒါကစာရေးဆရာပဲ၊ မင်းငါ့ကိုဒီအကြောင်းလေးပြောပြချင်တယ်။
အမေရိကန်လေတပ်သည်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် GNU / Linux သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်
နီဗားဒါးလေတပ်အတွက်တာဝန်ရှိသည်၊ ယမန်နှစ်စက်တင်ဘာလတွင်မြေပြင်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်များသည်ပြproblemsနာအမျိုးမျိုးခံစားခဲ့ရပြီး၊ လေယာဉ် ၎င်း၏စနစ်အတွင်းဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကူးစက်မှုကြောင့်ပျက်ကျခဲ့သောမောင်းသူမဲ့စစ်တပ် (Reaper) ။ အစပိုင်းတွင်သူတို့ကဤဖြစ်နိုင်ခြေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ကြသော်လည်း၊ ဤအမျိုးအစားဗိုင်းရပ်စ်သည်ဤအမျိုးအစားလေယာဉ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုခြိမ်းခြောက်ခြင်းမရှိဟုငြင်းခုံသော်လည်း၊
“ ဒီမေးလ်ဟာ malware တစ်ခုဖြစ်ပြီးကွန်ပျူတာကွန်ယက်တွေမှာတွေ့နိုင်ပြီးလည်ပတ်မှုခြိမ်းခြောက်မှုထက်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ အချက်အလက်သို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများကိုကူးစက်ရန်သို့မဟုတ်ရောဂါကူးစက်ခံရသည့်ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိဖိုင်များနှင့်ပရိုဂရမ်များကိုမဖျက်ဆီးရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ "
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဤဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းသည် US Air Force အတွက်ရှက်ရွံ့ဖွယ်ရာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Windows XP အခြေပြုစနစ်များအတွင်းအန္တရာယ်ရှိသောကုဒ်များကိုအလွယ်တကူထည့်သွင်းနိုင်ကြောင်းတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
အထူးပြုမီဒီယာအချို့၏အဆိုအရ၊ ဤရောဂါကူးစက်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာပြင်ပသိုလှောင်ရေးကိရိယာများအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်၊ ထပ်မံ၍ ပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်ဤစက်အမျိုးအစားကိုအသုံးမပြုရန်စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်အတည်ပြုသည်။
လုံခြုံရေးသုတေသီ Mikko Hypponen မှထပ်မံဖြည့်စွက်သည်မှာအချို့သောမြေပြင်ကွန်ပျူတာများသည်ဤပြသနာကိုရှောင်ရှားရန် GNU / Linux system သို့ရွှေ့ပြောင်းပြီးဖြစ်သည်ဟုဤဖန်သားပြင်တွင်တွေ့နိုင်သည် -
Windows XP နဲ့ Linux အခြေပြုစနစ်တစ်ခုကိုရွေးမယ်ဆိုရင်စစ်ဆင်ရေးစနစ်အတွက်ဒုတိယရွေးစရာကိုကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုတာသံသယမရှိပါဘူး။
လုံခြုံရေးနှင့်တည်ငြိမ်မှုအကြောင်းပြောသောအခါကျွန်ုပ်သည် Windows ကိုဘယ်တော့မှမစဉ်းစားတော့ပါ။ BSD စနစ်များ၊ Linux သည်အမြဲတမ်းစိတ်ထဲပေါ်လာသည်။
သတင်းရင်းမြစ်များ LinuxZone.es (ESP) - ကာကွယ်ရေးသတင်း (ENG)
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » အမေရိကန်လေတပ်သည်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Linux ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်
Juas! သူတို့က xD ကိုရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်
အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်ကြီးမားသောလက်နက်များကိုင်တွယ်ရန်မလုံခြုံသောစနစ်များပေါ်တွင်မှီခိုနေပါကသင်စိတ်ကူးကြည့်နိုင်ပါသလား။ ဘုရားရေ !!! သူတို့ကို Linuxmil ကိုတစ်ကြိမ်တည်းနှင့်သုံးခွင့်ပြုပါ။
ငါ Slackware ထည့်မယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Winbuntu မှရရှိသောအရာတစ်ခုခုကိုအရူးကဲ့သို့ပင်ပုံရသည်
သူတို့လည်း ... ဒီအရာတွေအတွက် Windows ကိုသုံးပြီး webos တွေပို့ကြတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်ကိုဘယ်လိုခေါ်သလဲ Skynet? ...
Uhh, ဒါပေမယ့်သူကသူလျှို XD ပဲဆိုရင်
၎င်းသည် Windows ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ IE6 ကိုသုံးပြီးဗိုင်းရပ်စ်တွေအဲဒီမှာဝင်လာရင်ကျွန်တော်အံ့သြမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့အရမ်းကိုစမတ်ကျတဲ့အတွက် gringos ဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့ယုံကြည်တယ်၊
Trickle - Linux အတွက် bandwidth ကန့်သတ်ချက်
Debian GNU / Linux ရှိအုပ်စုများနှင့်အသုံးပြုသူများ၏အဓိပ္ပာယ်